Brickaville: voasambotra ny lehilahy nisandoka ho kaomandà | NewsMada
Brickaville: voasambotra ny lehilahy nisandoka ho kaomandà
Tratra tany Loraindava, distrika Brickaville, noho ny fisandohana ho manamboninahitra ambony zandary ny lehilahy iray, ny 12 novambra teo. Miantso amin’ny alalan’ny finday ireo “kaomandin’ny borigady” na “kaomandin’ny kaompania” ny ataon’ity lehilahy ity ka milaza izy amin’izany fa kaomandà miasa ao amin’ny “Direction des resources humaines” ao amin’ny Toby Jeneraly Ratsimandrava ary miandraikitra famindran-toerana sy fisondrotana laharam-boninahitra. “Manome laharana finday izy amin’izany handefasana vola raha toa ka tsy mbola te hiala amin’ny toerany ireo tompon’andtraikitra antsoiny ireo satria”, hoy izy, “efa misy vinavina amin’ny tokony hanaovana izany ka azo ajanona izany raha mifanaraka ara-bola”, hoy ny fanazavana.
Tsy nampoizin’ity mpisandoka anefa fa tsy nandaitra tamin’ireo zandary ireo izany ka nisy ny fitsirihana ny toerana misy azy tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ireo orinasa mikirakira fifandraisana amin’ny finday. “Hita fa ao Loraindava ny monina izy, nidina tany nisambotra azy ny zandary avy ao amin’ny borigady Andekaleka. Efa voasambotra tao amin’ny borigady Moramanga, volana vitsivitsy, izy io noho izany fisandohana ho zandary izany ihany, saingy afaka tamin’ny fitsarana ka izao tratra fanindroany izao indray”, hoy ny fanamafisana.
Niaiky izy fa nisandoka andraikitra ary tsy vitan’ny famitahana ireo zandary am-perinasa ihany no tetehiny hatao fa miantso ireo zatovo maniry hanao zandary koa izy handoa vola aminy mba ho afaka amin’ny fifaninanana. Naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora izy io.